I-skewers yenyama elungisiwe - i-La Piccola Macelleria Messina
Kuvaliwe: NgoLwesithathu ntambama nangeSonto
Kusuka ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo:
Inyama elungisiwe nama-skewers - La Piccola Macelleria
Yonke imincintiswano yobuqiniso enyameni entsha neyobuciko.
4.5 /5 amavoti (amavoti angama-21)
Amatheku zilungiswe ngendlela yobuciko nge inyama yangempela e izithako ezintsha, esihlwabusayo ukulungiselela inyama, inyama ebandayo okuyigugu futhi ushizi amaSicili ejwayelekile ngezinye zezibiliboco eziningi ezikulindele Umabhusha Omncane a Messina.
Izikebhe Zenyama Elungisiwe Nezingcweti: IButcher encane ngumbuso wabathandi benyama eMessina
Umabhusha Omncane yindawo ezinikele ekulungiseleleni kobuciko okumnandi ukulungiselela inyama, abaseshi e i-hamburger okungezwe ekusikeni kwe- inyama ukukhetha kokuqala. Lapha uzothola umhlabathi di ukukhetha kuqala, esetshenziswa ngochwepheshe ababhula inyama yesikhungo sokwenza onkulunkulu ukulungiselela inyama esihlwabusayo egameni elimsulwa ubuqiniso. Ukuhlanganiswa kwamalungiselelo we-gastronomic amabanga lapha kusuka ku- inyama entsha yekhwalithi eqinisekisiwe kuze kube ushizi, ukufika umoya e Inyama ephekiwe enobuciko, eluhlaza futhi enomsoco. Isisebenzi esikunakekelayo nesinakekelayo, esakhiwe u-Orazio noKetty Molonia, sikhetha ngokucophelela konke inyama futhi uzilungiselela ngokunakekela okukhulu maqondana ne- Isiko laseGibhithe laseMedithera. Inhlanganisela yezithako ezibonakaliswa ukusha nokulandeleka kwe- inyama yisizathu sobuhle babo bonke amalungiselelo we-gastronomic e izingcweti zekhono.
Ama-skewer we-veal, inkukhu, ingulube kanye ne-Messinesi Braciole okumnandi
Umabhusha Omncane uphakamisa ukunqoba kwe inyama emhlophe nebomvu ukukhetha kokuqala ndawonye Ushizi weSicilian, ukusikeka okuvamile okubandayo kwe- I-Norcineria nemikhiqizo yendawo yokudla. Ukukhiqizwa kobuciko kwe abaseshi kuzokwenza ukujabulele ukusikwa kwethenda kakhulu kwe- inyama yezimvu, izinkomo o izingulube ngokuhlanganiswa nezithako zangempela ezithuthukisa iphunga layo namakha. Kusenjalo: amasoseji, Pancetta, isihlathi sengulube, USalame Sant'angelo nabathandekayo Ama-cutlets wesitayela se-Messina. Ziningi izibiliboco ze-gourmet ziyatholakala lapha ezidlula lapho ukulungiselela inyama nezamathenda izingcweti zekhono. Phakathi kwalokhu, i- ukhilimu wama-alimondi e amantongomane, lo kucindezelwe di ISant'Angelo di Brolo newayini UNerello Mascalese. Kukhona nama-liqueurs amaningi, njenge Malvasia, limoncello e URosolio. Ukunambitheka okuhle, ukunambitheka kwangempela, ukuvuselelwa nokulandeleka yizinsika zalokhu ukuhaha Isitolo sikaButcher di Messina.
Ikheli: Nge-Monsignor D'arrigo (Piazza Casa Pia), 35
Umakhala ekhukhwini: 345 7968707
Ifasitela lesitolo: www.lapiccolamacelleria.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 03398370837